दोहोरी गाउन भन्दै हजुर ‘बा’ लाई बोकेर काठमान्डौ आइन नातिनी ! मन परेन यहाँका मान्छ(भिडियो) – Tufan Media News
दोहोरी गाउन भन्दै हजुर ‘बा’ लाई बोकेर काठमान्डौ आइन नातिनी ! मन परेन यहाँका मान्छ(भिडियो)
८ पुष २०७७, बुधबार १५:५१
(भिडियो समाचारको अन्त्यमा राखिएकोछ)दोहरीगीत दुई पक्ष बीचको गीतहरूको सवाल जवाफ हो। नेपालका प्रायः सबै ठाउँमा दोहरीगीत गाएको सुन्न पाइन्छ। मेला, पाखा, रोदी, चौतारी, विवाह आदि उत्सवहरूमा युवा-युवतीहरू मादल, बाँसुरी आदि बाजाहरूको तालमा दोहरीगीत गाउने गर्दछन्। दोहरीगीत नेपालीहरूको परम्परा पनि हो। तर आजभोलिको नयाँ जमनामा यो पर्थामा केही कमी आएको देखिन्छ।
दोहरीगीत सबै भाषामा र सबै ठाउँका मान्छेहरूले गाउने गर्छन्। दोहरी गीतका गीतहरू तत्काल सिर्जना गरिएर गाउने गरिन्छ। दोहरी गीत युवा युवा बीच, युवती युवती बीच र युवती युवती बीच गाइन्छ।दोहोरी दोहोरो भन्ने शब्दबाट आएको हो। दोहोरो भन्नाले दुई तर्फबाट भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ दोहोरी गीतमा दुई तर्फबाट आएका सङ्गीतमा अन्त्यानुप्रास मिलाएर आएका सवाल जवाफ भन्ने बुझिन्छ।
विशेष गरेर दोहोरी गीत तत्काल सृजना गरिन्छ कुनै एउटा भाकामा आधारित रहेर। तथापि पछिल्लो पटक दोहोरी रेकर्ड गरेर पनि बजारमा आएका छन् र अहिले त्यसरी आएका गीतहरूले वजार लिइरहेका छन्। त्यस्ता गीतहरूमा केवल एकजना गीतकारले केटा र केटी दुवैको सवाज जवाफ समेटेका हुन्छन्, जसलाई गाएक गायिकाले त्यही अनुसार गाउने गर्दछन्।
दोहोरी विशेष गरेर नेपालको मौलिक गीत हो। लोकभाका, गाँउका, दुःखका वेदनाका, प्रेमका वा समाज, वातावरण लगायतका सबैकुराहरूलाई समेटेर गीत सृजना गरिएका हुन्छ लोक गीतमा। अनि त्यही लोकगीतलाई जव सवाल जवाफ वा दोहोरो तर्फबाट गाइन्छ त्यस्ता गीतलाई लोक दोहोरी गीत भनिन्छ। दोहोरीमा विभिन्न पाटा हरू समेटिएका हुन्छन्।
सोरठी, ठाडो भाका, कौडा, झ्याउरे, देउडा लगायत विभिन्न नेपालका भूभागहरूका गीत सङ्गित दोहोरी शैलीमा रहेका हुन्छन् अर्थात केटा अनि केटिका सवाल जवाफहरू। यद्यपि प्रत्यक्ष-लाइभ- खेलिने दोहोरीमा हुने मजा रेकर्ड गरिएका दोहोरीमा नहुन सक्छ। अनि सधैँ, र जुनसुकै अवस्थामा प्रत्यक्ष दोहोरी समेटिन पनि सम्भव पनि हुदैन जसको फलस्वरूप रेकर्ड गरिएका गीतहरूको बजार राम्रो रहेको हुन्छ। लोक गायकहरू, संकलकहरू जस्तैः कल्याण शेरचन, धर्मराज थापा, कुमार बस्नेत, वम वहादुर कार्की, र पछिल्लो पटक एकनारायण भन्डारी अनि राजु परियार र विष्णुमाझीसम्म आइपुग्दा नेपालको दोहोरीले ठूलो फड्को मारेको छ।